Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo bisha soo socota kulmi doona - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldMadaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo bisha soo socota kulmi doona
April 20, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. [Graphic: Puntland Mirror]
Ankara-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa la kulmi doona dhiggiisa Mareykanka Donald Trump bisha soo socota.
Erdogan ayaa sidaa ku sheegay wareysi gaar ah oo uu siiyay taleefishinka Al Jazeera shalay oo Arbaco ahayd, saddex maalmood kadib markii aftidii dastuurka loo codeeyay “Haa” taasoo Madaxtooyada wadanka Turkiga siinaysa awaamiir fulineed cusub.
“Trump waxa uu noogu hambalyeey aftidii iyo codayntii,” ayuu yiri Erdogan.
“Waxa ugu muhiimsan ee aan ka wadahadalnay waxay ahayd arrimaha Suuriya iyo Ciraaq. Waxaa noo qorsheysan bartamaha bisha May in aan kulano oo aan arrimaha uga wadahadalno si waji-waji ah.” Ayuu ku sii daray Madaxweynaha Turkiga.
Axadii lasoo dhaafay dalka Turkiga ayaa waxaa ka dhacday afti dadweyne oo ku saabsan wax ka bedelka dastuurka, iyadoo 51.4 boqolkiiba dadka Turkiyiintu ay u codeeyeen “Haa” si loo meelmariyo badelida dastuurkooda Xafiiska Madaxweynahana loogu ogolaado awood fulineed dheeraad ah.
February 7, 2017 Erdogan iyo Trump oo khadka taleefoonka ku wadahadli doona
July 23, 2017 Madaxweynaha Turkiga oo safar ku tagay Sucuudiga si uu gacan uga geysto khilaafka Khaliijka
March 12, 2017 Madaxweyne Erdogan oo uga digay dowladda Netherland in ay cawaaqib xumo kala kulmi doonto is-hortaag ay ku sameeyeen labo kamid ah wasiiraddiisa
Sanduuqa Horumarinta Abu Dhabi oo deeq dhan $89.8 milyan ugu deeqay Soomaaliya
Puntland President travels to Ethiopia for second time in April
Garoowe-(Puntland Mirror) Shirkii Wadatashiga Puntland ayaa gelinkii dambe oo Talaado ah ku soo gabogaboobay magaalada Garoowe ee caasimada Puntland. War-murtiyeedkii kasoo baxay shirka hoos ka akhriso. Related PostsSeptember 2, 2019 Puntland oo beenisay in hub [...]
Kismaayo-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhaawacantay qarax gaari oo ka dhacay gudaha magaalada Kismaayo fiidkii xalay oo Talaado ahayd, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan ammaanka iyo caafimaadka. Qaraxa aayaa dhacay markii gaari [...]